Klopp oo war naxdin leh ee ku saabsan Joël Matip ku wargaliyay taageerayaasha Liverpool – Gool FM
Klopp oo war naxdin leh ee ku saabsan Joël Matip ku wargaliyay taageerayaasha Liverpool
Dajiye February 2, 2021
(Liverpool) 02 Feb 2021. Tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa xaqiijiyay in daafaca kooxda Joël Matip uu ku maqnaan doono garoomada inta ka dhiman xilli ciyaareedka sababa la xiriira dhaawac ka soo gaaray dhanka canqowga ah.
Sida lagu xusay website-ka rasmiga ah ee kooxda, Jurgen Klopp ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Nasiib darro, hadda waxaan ogaanay, kaddib markii dhan walba laga baaray dhaawaca, in Joël Matip uu maqnaanayo inta ka dhiman xilli ciyaareedkan.”
“Wuxuu diyaar u noqon doonaa bilowga diyaar garowga xilli ciyaareedka cusub, wax walbana waa la diyaarin doonaa.”
Dhaawaca Joël Matip wuxuu dhabar jab cusub ku yahay safka daafaca Liverpool, kaddib Virgil van Dijk oo dhaawac halis ah ka soo gaaray dhanka jilibka, kaasoo sababay inuu garoomada ka maqnaado inta xilli ciyaareedka ka dhiman, sidoo kale waxaa isna maqan Joe Gomez.
Laakiin maalinkii ugu dambeeyay ee suuqa, Liverpool ayaa waxay ku guuleysatay in safka daafaceeda ku hagaajiso laba heshiis, maadaama ay qandaraas la gashay daafaca reer England ee Ben Davies, kaasoo kaga soo biiray kooxda Preston oo ka ciyaarta heerka labaad, iyo sidoo kale daafaca caalamiga ah ee reer Turkey Ozan Kabak oo kaga soo biiray naadiga Schalke illaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedka.
Horudhac: Manchester United vs Southampton… (Red Devils oo raadinaysa inay dib ugu soo laabato waddada guulaha ee Premier League)
Kaddib markii uu soo xirmay suuqa kala iibsiga bisha Janaayo ka bogo xiddigaha yimid iyo kuwa ka tagay kooxaha waa weyn ee Premier League